HORUMARINTA TSINIYA LAGA BILAABO ABUURKA: BEERITAANKA IYO DARYEELKA EE BERRINKA BANNAAN - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Zinia (Magaca Laatiinka - Zinnia) - caan ka mid ah caleemaha dilka ah iyo sanagada iyo geedo dhirbaaxada ee Astrovye qoyska. Warshad magaceed oo magaceeda lagu magacaabo Johann Gottfried Zinna, oo loo arko in uu ku dhashay Koonfurta Mexico.
Ma taqaanaa? Aztecs waxay soo saartey Zinnia 1500, waxayna u timid Europe qarnigii 18aad waxayna ku dhowaad isla markiiba noqotay qurxinta ugu wanaagsan ee beeraha iyo soo dhawaynta. Qarnigii labaatanaad, Zinnia waxaa horey loogu soo diyaariyay dhamaan qaaradood, xitaa waxay calaamad u ahayd mid ka mid ah dawladaha Mareykanka - Indiana.
Ku beerashada miraha tsiniya ee dhul furan
Zinnias, oo ay yaqaanaan magaca caadiga ah ee kuwa waaweyn, iyo in ay kala duwan, ayaa waxaa jeclaa growers ubax badan iyo taageerayaasha dhirta ornamental. Waa wax aan macquul aheyn in la helo beerta taas oo dhaqankani uusan korin doonin. Zinia uma baahna daryeel gaar ah, iyo sii kordhaya abuurka waa geedi socod aad u fudud oo bannaanka u eg. Horumarinta zinnia waa geedi-socod aad u xiiso badan: miraha way wareegsan yihiin oo la shaqeeyaan iyaga waa kuwo sahlan. Si kastaba ha noqotee, beerashada iyo daryeelidda ubaxa waxay weli leeyihiin muuqaalada qaarkood.
Dabcan, haddii aad rabto in ubaxu kuugu farxo quruxdooda sida ugu dhakhsaha badan, waxaad u baahan tahay inaad dooratid habka saxda ah oo loo go'aamiyo wakhtiga abuurista. Kobcinta zinnia boggaaga dhowr siyaabood:
abuuro abuurka guriga (habka seedling);
abuur beeraha hoostiisa hoostiisa (midigta sariirta beerta).
Su'aasha ah "Markaad ku beeranayso kuwa waaweyn ee dhulka ku furan?" waxaa jira hal jawaab - kaddib marka qiiqa adag uu dhaafo mana jirto khatar ku ah maryaha habeenkii. Tani inta badan waa dhammaadka May ama bilowga Juun.
Si loo go'aamiyo miraha zinnia ay yihiin kuwo waxtar leh, waxay ku duuduuban yihiin faashad ama maro qoyan oo lagu qooyey ka hor intaan la beeri. Abuurka cusub ayaa ku tufaya laba maalmood ka dib, iyo kuwa waayeelka ah waxay qaadan kartaa todobaad.
Ku dheji goobta tsiniya
Tan iyo markii uu Zinnia yahay warshad kuleyl iyo iftiin leh, beerashadooda waa inay ka dhacdaa meel aan la wada daboolin oo ay si weyn u iftiimiso qorraxda.
Waa muhiim! Waxaa lagugula talinayaa inaad ka fogaato qorshaha si uusan dabayshu u waxyeeleynin afkoda.
Cunto karis ah, ciid ah oo bacrin ah ayaa ku habboon ciidda, ka hor inta aan la beeri ayaa lagama maarmaan u ah in la nadiifiyo aagga laga soo saaro haramaha. Sababtoo ah xaqiiqda ah in Zinnia ay si xun u falcelinayso joojinta qoyaan ee ciidda, waxaad ku dari kartaa ciid yar ama sodan markaad beerto. Sidaas awgeed waxaad carrabka ku dhajisaa oo ka hortageysaa biyaha taagan.
Nidaamka abuurka abuurka beerta
Ka hor inta aan si toos ah loo beerin abuurka dhulka banaanka, aagga waa in lagu daboolaa iyada oo la isku qurxiyo. Tani waxay abuuri doontaa saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo oo waxoogaa xajisto qoyaanka ciidda.
Cawska loo yaqaan "tsinii" sariirta waxay noqon kartaa qaabab joomatari ah: goobada, qaabka jeegareynta ama wareegga wareegga. Waxyaabaha ugu muhiimsan - waa lagama maarmaan in la tixgeliyo noocyo kala duwan, si sariirta u ekaato mid isku mid ah.
Qoto dheer ee ceelasha waa inay ahaataa qiyaastii 5 cm, iyo miraha dhowr ah ayaa lagu meelayn karaa hal ceel. Masaafada u dhaxaysa godadka waa inay ahaataa ilaa 10 cm.
Waa muhiim! Haddii wakhtiga beerto si sax ah loo doorto, caleemaha kowaad waxay soo muuqan doonaan hal usbuuc.
Si ay u koraan ubax buuxa, ka dib markii biqilka, khafiifinta ee duurka waa in la fuliyaa, tegaya fogaan ah 30 cm u dhexeeya iyaga, iyo 20 cm for dhirta hooseeyo sii kordhaya.
Hoyga of caleemaha ugu horeeya ee zinnia
Sidaas darteed miraha u muuqata in aysan dhaawici caleemaha, waxaa lagu talinayaa in lagu daboolo wax khaas ah.
Astaamaha aasaasiga ah ee daryeelka waayeelka
Daryeelka loogu talagalay zinnia-ga ayaa ku xiran sida loo beerto. Waxa ugu muhiimsan waa in la siiyo ubax ku filan waraabinta (xididka), bacarimis, loosening joogto ah, jaridda, iyo sidoo kale ka takhalusi cayayaanka iyo daaweynta. Taasi waa, waxaa jira agrotechnology khaas ah oo loo yaqaan 'zinnia'.
Ma taqaanaa? Nolosha ubaxu waa 35 cisho, jinsiyaduna waxay ku jiri kartaa weel muddo 2 toddobaad ah.
Ku dheji dusha sare
Beerta bilowga ah waxay inta badan qabaan su'aasha ah "Sidee loo tiriyaa jinni iyo waa in la sameeyaa?" Si loo beero baadiyaha, nidaamkani dhab ahaantii waa lagama maarmaan in la fuliyo.
Sida ugu dhakhsaha badan ubax qaadan xidid iyo koraan, waxay u baahan yihiin inay ku dhuujin sare ee madaxa, natiijada ah in ay duurka u noqon doonaa laan iyo moreh. Tan waxaa lagu sameeya labada kabood ee sadexaad ama afaraad. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad u koraan zinnia xarrago ah ee peduncles dheer, uma baahnid qallajin.
In lagu waraabiyo zinnia waxay u baahan tahay hab gaar ah, maxaa yeelay ma u dulqaadanayso xad dhaafka qoyaanka, taas oo sababi karta dildillaaca. Maqnaanshaha qoyaanka, marka loo eego, waxay waxoogaa saameyn doontaa geedka, maadaama ay ka mid tahay noocyada abaarta u adkaysta.
Wixii ku dheehantahay waa ku haboon tahay, laakiin waraabin badan, qaabka taas oo ku xiran xaaladaha cimilada ee gobolka taas oo ay korayaan.
Waa muhiim! Markaad waraabiso waa lagama maarmaan si loo hubiyo in biyaha uusan ku dhicin peduncle, maaddaama ay taasi dhalin karto xanjo ubax ah.
Maalmo roobab ka dib waxay lagama maarmaan tahay in laga saaro inflorescences ubax si ay ubaxu u badan tahay oo u sii dheeraato.
Carrabta meesha ay Zinnia la qorshaynayso inay koraan waxay noqon kartaa wax kasta. Si kastaba ha ahaatee, dhulka bacrin ah, ubaxa wuxuu u koraa si ka wanaagsan. Dhulka waa la dubi karaa kahor intaan si toos ah loogu beerin dhul furan. Si arrintan loo sameeyo, waxay qashinayaan goobaha waxayna keenaan compost (humus, peat) at heerka 8-10 kg halkii 1 m², si fiican u qallajin iyo dabacsan ciidda ka dib.
Waxaad isticmaali kartaa Bacriminta macdanta. Xaaladdan oo kale, iyadoo lagu xisaabinayo 1 m², waxaad u baahan doontaa:
1 tbsp. qaaddo of sulfate potassium;
1 tbsp. qaaddo superphosphate;
1 tbsp. nitrophoski qaado.
Inta lagu jiro muddada ubax moyora daruuri ah quudin ilaa iyo bilowga ah gaysashada. Marka tani loo isticmaalo bacriminta dareeraha ah ee dhirta ubaxyada.
Uruurinta iyo kaydinta abuurka
Abuurka Zinnia waxay u bislaadaan laba bilood gudahood bilowga bilowga. Sidaa darteed, ma aha wax la yaab leh in bannaanka u badan yihiin xiisaynaya sida loo beeray abuurka tsiniia on iyaga u gaar ah? First of dhan, waa inaad sugto ilaa sanduuqyada abuur ah si buuxda u bislaadaan iyo midabkooda soo noqdaan brown.
Waa muhiim! In caleemaha amarka ugu horeeya, miraha waxay leeyihiin tayada ugu wanaagsan, sidaas darteed caleemaha lateral waa in laga saaro tijaabooyinka la soo xulay horay.
Si taxadar leh u buuxi, maqaarka fiiqan, laga gooyo asliga ah oo la qalajiyey. Abuurka qallalan waxaa lagu saaraa warqad, kaas oo markaa loo isticmaali karaa baqshad lagu keydiyo, laguna nadiifiyo haraaga ubaxa. Ku kaydi meel qallalan oo heerkulka joogtada ah. Bukannada abuurka waxay socotaa 3-4 sano.
Wixii geedo lagu beeray badhtamaha April. Dhirta ayaa si dhakhso ah u korodhay dhererka, sidaas darteed, haddii la beeray horraantii, markii ay soo degtey dhulka zinnia waxay qaadi kartaa burooyinkeeda, taas oo inta lagu gudbi karo gaadiidka. Intaa waxaa dheer, warshad qaangaar ah ayaa ka sii dartay meel cusub.
Wixii geedo ah waxaad u baahan tahay inaad qaadato weel balaadhan (qoto dheer - aan ka yarayn 10 cm) tan iyo geedo waaweyn yihiin, waxaa la dhigaa dhulka oo fogaan ah 2-3 cm midba midka kale, qoto-abuurka aan ka badnayn 1 cm. Dhulku waa inuu si fiican u qoyaa oo daboolaa filim .
3-4 maalmood ka dib, caleemaha ayaa soo muuqan doona filimkana laga saari karaa. Ha ka baqin tsinii - ciidda waa inay ahaato wax qoyan, iyo Heerkulka wanaagsan ee biqilka zinnia waa + 22 + 24 ºC. Ka dib markii dhirta ay koraan illaa 10 cm, waxay u baahan yihiin inay kudoodaan dheriyo kala duwan. Si aad uhesho nidaamka si fiican, xididka ugu muhiimsan waxaa la jiidan karaa 1-2 cm 2 toddobaad ka hor inta aanad beeran dhulka, waxaad u baahan tahay inaad bilowdo "socodka" geedka, isaga oo keenaya balakoonka cimilada diiran. Sidaa darteed, caleemaha ayaa adkaan doonta oo xoojin doona.
Dhibaatooyinka sii kordhaya ee tsiniya
Sida loola tacaalo cayayaanka
Cayayaanka waxay marmarka qaarkood weeraraan jinsiyada sida:
Waxay jecel yihiin jinni iyo cockchafer, kaas oo ah in la ururiyo gacanta isla markaana lagu soo rido weel biyo leh saabuun.
Iyada oo caloosha ayaa la halgamay ploshek la biir, oo lagu riday goobta. Waxaad kala saari kartaa sheyga saqafka ama dhajinta inta u dhexeysa geedo - xajinta jaceylka si ay u gurguuraan oo ay gacanta kuugu soo ururin karaan.
Si loola dagaallamo aphids, zinnia waxaa lagu daaweeyaa saabuunta taranka (10 g halkii 1 litir oo biyo ah). Haddii infekshanku uu ahaa mid muhiim ah, codso xalka "Fufanon" ama "Aktellika", oo loo diyaariyay sida waafaqsan tilmaamaha.
Sida loola tacaalo cudurada
Zinia, sida dhaqammo badan, ayaa lagu qaadi karaa cudurrada kala duwan:
Haddii cimiladu qoyan tahay oo qabow, jeexjeexyada budada ah ayaa laga arki karaa zinnia - dhoobo cad oo cad oo cagaar ah iyo caleemo. Ku mashquulsan sidii loo yareyn lahaa waraabinta. Xitaa haddii mid ka mid ah caleenta geedka waxaa lagu daboolay dhibco wareegsan oo baraf ah (barta bakteeriyada), waxaa lagama maarmaan ah in la qaado tallaabooyin degdeg ah. Jebiso caleemaha cudurka qaba, iyo haddii ay dhacdo infekshin xad dhaaf ah gabi ahaanba burburinaysa dhirta - ma jirto daawo cudurkan.
Si loola dagaallamo kalluunka cagaaran, xabuubka budada ah iyo Fusarium, fungicides ("Fundazol", "Topsin-M") ayaa loo isticmaalaa.
Ma taqaanaa? Cudurrada Zinia waxay dhacaan, ugu horreyntii, ku xadgudubka daryeelka dhirta (beeritaanka qaro weyn, waraabin xad dhaaf ah). Sidaa daraadeed, waxaa lagama maarmaan ah in si dhakhso ah loo aqoonsado dhibaatada isla markaana u hagaajiso. Kaliya sidan ayaad uga hortagi kartaa dhibaato.
Sida aad u arki karto, daryeelka caafimaad ee Zinnia waa mid qaas ah, inkasta oo daadinta aysan wax dhib ah gaarin. Ka dib markaad aqriso maqaalkan, waxaad si ammaan ah u iibsan kartaa abuurka iyo bilaabi kartaa ubaxkan quruxda badan.